CodeFlare, IBM yakavhurika sosi sosi yekudzidzisa maAI modhi anomhanya pane multicloud mapuratifomu | Linux Vakapindwa muropa
CodeFlare, IBM yakavhurika sosi sosi yekudzidzisa maAI modhi anomhanya pane multicloud mapuratifomu
Dhata analytics uye muchina kudzidza zviri kuwedzera kushandiswa zuva rega rega uye makambani anoedza mutambo uyu anotarisanawo nematambudziko ekubatanidza mune zvese. Kugadzirisa matambudziko aya, IBM ichangobva kuunza CodeFlare, yakavhurika sosi sosi, iyo yakavakirwa paRay akagovera system kubva kuRISE rabhoritari kubva kuYunivhesiti yeCalifornia kuBerkeley yemamishini ekudzidza mamodheru.
CodeFlare inotarisira kurerutsa iyo AI iteration maitiro nezvimwe zvakasarudzika kuyera kuyerera ye data data basa uye yakakura kubva muchirongwa mune IBM boka rinotarisira kugadzira imwe yekutanga yepasi-nanometer prototype machipisi.
IBM inoti CodeFlare inobatsira kurerutsa kubatanidza uye kuyananisa kuyera kwedata hombe uye huchenjeri hwekunyepedzera mafashama mune akawanda-gore magadzirisiro.
"CodeFlare inotora pfungwa yekudzidzira muchina wakareruka ... nhanho imwe kuenda kumberi, kuenda kupfuura nhanho dzakazvimiririra kuti ubatanidze mapayipi ekupedzisira kusvika kumagumo aine musayendisiti anoshamwaridza data sePython, kwete midziyo," Priya Nagpurkar, Principal Hybrid Cloud Platform kuIBM Research, VentureBeat yakati kuburikidza neemail… inozvitsauranisa nekurerutsa kusangana uye kuyera kwepombi dzese pamwe nekubatana nguva yekumhanya uye nehurongwa hwekugadzirisa. "
Mune blog blog, IBM yakatsanangura kuti kugadzira mhando dzekudzidza muchina mazuva ano ibasa rekushandisa zvakanyanya.. Vanotsvagurudza vanofanira kutanga varovedza nekukwiridzira modhi, inosanganisira mabasa akadai sekuchenesa dhata, kuburitsa maficha, uyezve modhi optimization, uye ndipo IBM yakati CodeFlare inobatsira kurerutsa basa iri.
Sezvo CodeFlare inoshandisa chinongedzo chakavakirwa pamutauro wechirongwa chePython kugadzira pombi, kuburikidza nazvo zviri nyore kubatanidza, kuenzanisa uye kugovana dhata. CodeFlare inogona kuzoshandiswa kubatanidza mapaipi ekufambisa pamusoro pema Cloud computing mapuratifomu, pasina kudzidza mutauro mutsva webasa rekufambisa kwerudzi rupi nerupi rwezvivakwa.
IBM yakati mapaipi inogona kuisirwa pane chero gore zvivakwa, kusanganisira iyo nyowani IBM Cloud Code Injini, inova isina chipuratifomu uye Red Hat OpenShift, uyezve inopa maadapter yezvinokonzeresa zviitiko, sekuuya kwefaira nyowani, zvinoreva kuti mapaipi anogona kusangana nekubatana nemamwe makore-echinyakare ecosystem, IBM yakati.
Zvakare, iyo zvakare inobvumidza dhata kutakurwa uye kupatsanurwa kubva kune akawanda masosi, senge gore rezvinhu zvitoro, dhata dhata, uye kugovera mafaira masystem.
Kubatsira kukuru kwekushandisa CodeFlare kumisikidza mapurojekiti matsva ekudzidza emuchina inomhanya. Iyo kambani yakataura kuti apo mumwe wevashandisi vayo akashandisa CodeFlare kuongorora uye kugadzirisa mapaipi zviuru zana kudzidzisa michina yekudzidza, yakaderedza nguva yekumhanya imwe neimwe kubva pamaawa mana kusvika pamaminetsi gumi nemashanu chete.
Kumhanya kwakakosha, IBM yakatsanangura, nekuti data seti iri kukura nekukura, zvinoreva kuti michina yekudzidza mafashama anowedzera kuomarara uye kuomarara. Nekudaro, vaongorori vanoshandisa yakawanda nguva kugadzirisa marongero avo vasati vagona kuita zvinhu.
"IBM iri kutsvaga izvi nekushandisa yakavhurika sosi yeCodeFlare sehurongwa hwevashandi vepa data nevagadziri kugadzira mhando dzehungwaru dzinogona kumhanya pane chero gore," akadaro Mueller. "CodeFlare inomhanya paRedHat OpenShift uye inogonesa kugona kwayo kwakawanda-gore kubva ipapo."
CodeFlare iri kuenda yakavhurika sosi nhasi inowanikwa muIBM repository paGitHub, uyezve iri kuburitsa akati wandei masampula eCodeFlare mapaipi iyo yavakagadzira uye inomhanya pane IBM Cloud uye Red Hat OpenShift.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo kana kukwanisa kuongorora kodhi yekodhi yeCodeFlare, unogona kuzviita kubva pane inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » CodeFlare, IBM yakavhurika sosi sosi yekudzidzisa maAI modhi anomhanya pane multicloud mapuratifomu
Libre-SOC, yekutanga yakavhurwa hybrid chip mune iyo CDC 6600 maitiro